ကိုရီးယား အမျိုးသမီး အဆိုတော်အဖွဲ့ PRISTIN ကို တရားဝင် ဖျက်သိမ်း - Yangon Media Group
ကိုရီးယား အမျိုးသမီး အဆိုတော်အဖွဲ့ PRISTIN ကို တရားဝင် ဖျက်သိမ်း
ကိုရီးယားအမျိုးသမီးအဆိုတော်အဖွဲ့ PRISTIN ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း မီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ သတင်းများ၏ အဆိုအရ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် Pledis အင်တာတိန်းမန့်တို့သည် ဆွေးနွေးမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရန် စိတ်မ ကောင်းစွာဖြင့် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Pledis က ယင်းသတင်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် နာယောင်း၊ ရိုအာ၊ ယူဟာ၊ အွန်ဝူး၊ ရဲနာ၊ ရှီယွန်းနှင့် ကိုင်လာတို့သည် အေဂျင်စီနှင့် စာချုပ်များကို အဆုံးသတ် လိုက်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ ကျောကျောင်း၊ ယဲဟာနာနှင့် ဆွန်းယောင်းတို့သည် ယင်းအင်တာတိန်းမန့်တွင် ဆက်ရှိ နေမည်ဖြစ်သည်။ PRISTIN အဖွဲ့သည် After School အဖွဲ့နောက်ပိုင်း Pledis အင်တာတိန်းမန့်၏ ပထမဆုံးအမျိုးသမီးအဆိုတော်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်ခုနစ်ဦးမှာ Mnet ၏ “Produce 101” အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် ပွဲဦးထွက်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ပြီး ကျောကျောင်းနှင့် နာယောင်းတို့သည် IOI အဖွဲ့မှ နောက်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်များလည်းဖြစ်သည်။
အဖွဲ့ဝင်ဆယ်ဦးဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး မီနီအယ်လ်ဘမ်နှစ်ခုကို ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ယင်းအဖွဲ့သည် ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီးနောက် MAMA နှင့် ဆိုးလ်ဂီတဆုပေးပွဲတို့တွင် တက်သစ်စအနုပညာရှင်ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ ယင်းအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်ငါးဦးသည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ မေလတွင် PRISTIN V အဖွဲ့ခွဲ ဖြင့် ဂီတလုပ်ငန်းများကို လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အဖွဲ့တစ်ခုလုံးအနေဖြင့် အယ်လ်ဘမ်တစ်ချပ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးနောက် နှစ်နှစ်အကြာတွင် အဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပညာရေးဆိုင်ရာ ချေးငွေအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ပေးရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား တိုက်တ?
တစ်နှစ်ကို ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခ ဒေါ်လာ တစ်သန်းကျော် အကုန်အကျခံနေရတဲ့ ကင်ကာဒရစ်ရှန်
နှစ်ပေါင်း ၁၁ဝဝ ကျော် သက်တမ်းရှိသည့် ပုဂံ သရပါတံခါးကြီးကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ် ထိန်းသိမ်း??
တာချီလိတ်မြို့၌ အာခါ ခါးထောင်းဖားပွဲတော် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ
အနံ့ဆေးများထည့်၍ မြေပဲဆီနှင့် နှမ်းဆီအဖြစ် ဈေးချိုစွာ ရောင်းချနေခြင်းနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ?
ကျွန်တော့်အချစ်ရေးသိချင်ရင် ကျွန်တော့် Facebook နဲ့ Instagram ကို Follow လုပ်ထားပေးပါ ~ ထွန်းထွန်း
တောမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရသော ကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်း၌ မိုးသည်းထန်၍ ရေကြီးမှုများကြုံတွေ့